Makhaayadaha raaxada leh ee raaxada ee Barcelona | Wararka Safarka
Barcelona, ​​halka ay ku dhalatay kuugga weyn, waa magaalada ku habboon in lagu raaxeysto caloosha ugu fiican shirkadda ugu fiican. Haddii aad u dabaaldegeysid sannad-guuradeed gaar ah, taariikh ugu horreysa, soo kabashadaas jacaylka ah ama si fudud ula yaabi lamaanahaaga maxaa yeelay waxaad jeceshahay inaad waqti wada-qaadataan, Barcelona waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada makhaayadaha saaxiibtinimo iyo kuwa raaxada leh. Si hawshaadu u fududaato, waxaan kuu soo bandhigeynaa kuwa ugu xiisaha badan.
2 Talyaaniga yar
Yashima waa mid ka mid ah makhaayadaha ugu da'da weyn Japan ee ku yaal magaalada Barcelona, ​​isagoo ka mid ah kuwa ugu horreeya ee furaya si ay u soo bandhigaan waxyaabaha wanaagsan ee cunnada Japan. Intaa waxaa dheer, makhaayaddan khibrad ahaan lafteeda maahan cuntada laakiin sidoo kale habka loo soo bandhigo iyo qalabka guryaha. Tusaale ahaan, Yashima waxaad ku cuni kartaa "kotatsu", qol leh miisas heer sare ah oo sida caadiga ah derin tatami Jabbaan ah naftaada u wada dhan.
Qaar ka mid ah suxuunta xiddigaha ee maqaayaddan oo ku taal waddada Josep Tarradellas 145, ayaa ah clams la isku qurxiyo, Yakisoba, Japanese steak tartare, prawn tempura ama khudradda Japan iyo hilibka fondue, iyo kuwo kale oo badan.
Haddii waxa aad raadineyso ay tahay casho jacayl ah oo ka dhacda Barcelona iyo sidoo kale inaad ku raaxeysato muusig toos ah, makhaayaddan oo ku taal bartamaha degmada Born, Little Italy, ayaa noqon doonta dookhaaga ugu fiican. Waa aag ay ka buuxaan fanaaniin, arday iyo waxgarad xaafada siiya jawi aad u xiisa badan oo Bohemian ah.
Talyaanigii yaraa wuxuu albaabada ufuray 1988 wixii intaa kadambeeyay ma uusan joojin farxada martidiisa. Habeennadooda jazz-ka ayaa guul u ahaa maaddaama muusikadoodu ay nooleyneyso fiidkii iyo qaabka codka ayaa u oggolaanaya wadahadal aan dhib lahayn miis isla markaana ka hortagaya dhageysiga wadahadallada u dhexeeya miisaska, taas oo ku habboon fiidkii jacaylka.
Liiska, Talyaani yar waxaad kaheli doontaa cunnooyinka cuntooyinka soo jireenka ah ee Mediterranean-ka halkaasoo carpaccios, bariis iyo baastada ay kasoo muuqdaan, iyo menu aad u dheer oo is biirsaday oo kufiican kalgacalka rootiga.
Calle Aribau 106 magaalada Barcelona waxaad ka heli doontaa makhaayada Sergi de Meià, meel dhalaalaya oo soo jiidasho leh oo ku habboon in lala wadaago daqiiqad gaar ah iyadoo lagu raaxeysanayo cunno macaan.
Makhaayaddan waxaa lagu gartaa iyada oo la yaqaan sida loo dhexgeliyo cunnooyinka dhaqanka iyo kuwa maxalliga ah ee Catalan oo leh nuxurka carabiga, japan, Peruvian, Mexico ama cunnada Faransiiska taas oo horseeday suxuunta dib loo soo celiyo sida wan bararsan oo leh baradho, toon iyo rosemary, suquet fish, bariiska cuntada badda , Digaag duban ama kalluun ka yimid suuqa oo leh basal iyo guduud, iyo kuwo kale.
Taarankan Venetian-ka ee ku yaal Wadada Jerusalem ee ku xigta Boqueria ee wadnaha Raval waa sharad aamin ah oo casho jacayl ah. Ballanta waxay noqoneysaa guul layaableh haddii aad dhigato miis dabaqa sare ah, kaas oo laga heli karo jaranjaradiisa alwaax, geeska ugu dambeeya ee qolka oo si yar u shidan si kor loogu qaado asturnaanta.
Intaas waxaa sii dheer, waxaad jeclaan doontaa suxuunta Bacaro maadaama aysan ahayn baastada talyaaniiga ah iyo pizza laakiin taa bedelkeeda waxay bixisaa menu kala duwan oo ay ku yaalliin alaabooyin wanaagsan iyo suxuun dhadhan fiican leh sida sardines-ka ku jira saare oo lagu kariyey sabiib iyo basasha, baradho leh duck rackut, risotto leh nero di sepia ama xeebta squid leh khudaar.
Waxay ku yaalliin Tuulada Olombikada ee ku taal xeebta horteeda, CDLC waxaa lagu gartaa jawigeeda gaarka ah iyo midka casriga ah. Qurxinta kooxdan lagu caweeyo oo leh makhaayad / qol fadlan waa qurux badan waxayna ku habboon tahay casho qaas ah maadaama aad ku hor cuni karto xeebta horteeda, halka neecawda badduna ay gebi ahaanba kugu daboolayso, Meel raaxo leh oo qabow leh oo leh qolal nasasho leh oo ku xirmaya daahyada si sir badan loo helo.
Liiska waxaa ku badan cunnooyinka Mediterranean oo taabanaya Aasiya iyo Carabi. Waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo sushi aad u fiican ah iyo miisaska ay ku dubteen khudaarta ayaa aad u fiican. Sida macmacaanka, miraha macaan ee leh shukulaatada iyo kareemka waa saxan aad loogu taliyay iyo in lagu dhameeyo casho qurux badan oo jaceyl ah, wax ka fiican dhalada cava ama champagne.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Barcelona » Makhaayadaha raaxada leh iyo kuwa dhow ee Barcelona